Maxaa ka soo Baxay Kulankii Dhexmaray Wasiir Dr Maxamed Cabaas iyo Safaarada Japan, Muxuuse Yahay Saamiga Puntland ku Leedahay 38 Million ee Japan ugu Deeqday Soomaliya?
Nairobi Mon 25-07-2016 11:52:53
(Nairobi, Puntlandi): Kulan shalay ka dhacay safaarada Japan ku leedahay Soomaaliya, balse fadhigeedu yahay Nairobi, ayaa Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada iyo Xiriirka Caalamiga ee Puntland Dr. Maxamed Cabaas Macalin Cumar waxa uu ka codsaday dowladda Japan in la qeexo saamiga Puntland ku leedahay 38 million dollar ee Japan sanadkan 2016 ugu deeqday Soomaaliya.
Kulankan oo socday 1 saac iyo 35 daqiiqo, ayaa waxaa dhinaca dowladda Japan u matalayey mudane Yuki Yoshida oo dowladda Japan u qaabilsan kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta mashaariicda laga fuliyo Soomaaliya. Waxaa kale oo kulanka goob joog ka ahaa madaxa Puntland TV ee Kenya Maxamed Cabdullaahi Khaliif (Maxamed Shiine).
Dhibaatada jirta ayaa ah in deeqaha dhaqaale ee lagu soo qaado magaca Soomaaliya lagu koobo Muqdisho iyo in gacanta loo geliyo hay'adaha caalamiga oo fadhigoodu yahay Nairobi.
Safaarada Japan ayaa Wasiirka u soo bandhigay tirada mashaariicda Japan ka fulinayso Soomaaliya iyo hay'adaha hirgalinaya, waxayna yihiin sidan:
•	Tirada mashaariicda waa 14 mashruuc, waxaana ku baxaya 38 million oo dollar.
•	Waxaa fulinaya 12 hay'adood oo hoos yimaada Qaramada Midoobay, lana shaqeeya Wasaarada Qorsheynta iyo Xiriirka Caaamiga ee Dowlada Federalka Soomaaliya.
•	3,500,000 dollar, gargaarka deg-dega ah, waxaa fulinaya ICRC.
•	4,500,000 dollar, Xakamaynta dadka Tahriibka ah, waxaa fulinaya IOM.
•	2,400,000 dollar, Nadiifinta miinooyinka, waxaa fulinaya UMMAS.
•	1,200,000 dollar, Doorashada Guud ee Soomaaliya 2016, waxaa fulinaya UNSOM.
•	1,300,000 dollar, Dhaqan celinta maleeshiyaadka xagjirka ah, waxaa fulinaya UNSOM.
•	3,200,000 dollar, mushahaaraadka ciidanka booliska Soomaaliya, waxaa fulinaya UNOPS.
•	3,500,000 dollar, qalabaynta ciidanka booliska Soomaaliya, waxaa fulinaya UNDP.
•	1,500,000 dollar, shaqo abuurka dhalinyarada, waxaa fulinaya UNDP.
•	5,000,000 dollar, Barakacayaasha, waxaa fulinaya UNHCR.
•	5,000,000 dollar, Bixinta adeegyada dadka tabaalaysan, waxaa fulinaya UNHCR.
•	1,800,000 dollar, Ka hortaga umul raaca, waxaa fulinaya UNFPA.
•	625,000 dollar, Taakulaynta dhalinyarada Dhoobley, waxaa fulinaya UNIDO.
•	3,100,000 dollar, Quudinta dadka tabaalaysan, waxaa fulinaya WFP.
•	500,000 dollar, ka hortaga xadgudubyada kufsiga, waxaa fulinaya SRSG ToE.
Saraakiisha dowladda Japan ayaa Wasiirka u sheegay in goobaha lagu bixinayo deeqahan ay go'aankeeda gaari doonaan hay'adaha Qaramada Midoobay, sidaas darteedna Dowladda Puntland looga baahan yahay in iyadu la xisaabtanto Dowlada Federalka iyo Hay'adaha Qaramada Midoobay.
Sanadkii 2014, Japan waxay deegaanada Puntland u qoondaysay 4 mashruuc, balse hal mashruuc kaliya ayaa soo gaaray.